Los Caballos del Vino: miresaka ny tantarany sy ny fankalazany isika | Soavaly Noti
Ny Wine Horses dia festival ankalazaina ao Caravaca de la Cruz (Murcia) amin'ny datin'ny 1 sy 2 Mey. Ity fankalazana ity, izay nanjary nalaza nandritry ny taona maro, dia ankalazaina mandritra ny Festivities ho fanomezam-boninahitra ny Sakramenta Masina sy Vera Cruz manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 Mey.
ny nokarakarain'ny Tarika soavaly divay, federasiona iray ahitana fikambanana enimpolo antsoina hoe "peñas caballistas". IRETO Mandray anjara amin'ny soavaliny amin'ny fifaninanana telo i Peñas: ny an'ny Soavaly barebackny Harnessing ary ny Career. Tsapako ity farany, ilay nankalazaina ny marainan'ny 2 may, ilay malaza sy malaza indrindra.
Fantatrao kely ve ny momba an'io fetibe mifandraika amin'ny Equine io?
Ny festival lehibe ao an-tanànan'i Caravaca de la Cruz isan-taona dia mahasarika mpitsidika bebe kokoa eran'izao tontolo izao. Tao anatin'izay taona faramparany dia maromaro olona maherin'ny 100.000.
1 Tantaran'ireo soavaly divay
2 Ireo soavaly divay
2.1 Ny fifaninanana soavaly bareback
2.3 Ny hazakazaka soavaly divay
Tantaran'ireo soavaly divay
Ny niandohan'ny festival dia mihitsoka eo amin'ny tantara sy ny angano. Ny lovantsofina dia milaza fa rehefa ny trano mimanda Templar any Caravaca dia nanao fahirano an'i Granada Moors tany amin'ny 1250 tany ho any, Tonga ny fotoana iray izay tsy namatsy ampy ny famatsian-drano rehetra. Nisy vondrona Knights Templar nanapa-kevitra ny hiampita ny tranokala Silamo mba hitady ny rano irina.
Rehefa tsy nahazo rano izy ireo dia nitondra divay amin'ny miafina ao ambadiky ny biby ary nihazakazaka niverina izy ireo hamitaka ny fahavalo sy ny fefy izay nalamina nanodidina ny Castle. Rehefa tafaverina izy ireo dia noraisina tamim-pifaliana, noheverina ho mahery fo tamin'ny famonjena azy ireo tamin'ny toe-javatra nahitany ny tenany. Ny Knight sy ny soavaliny dia niravaka haingo voaravaka fehiloha sy fehezam-boninkazo.
Tany am-piandohan'ny taona 1231 tao amin'ny trano niverenan'ireto Knights ireto dia niambina ny Relic of the Holy Cross.
Hatramin'ny Moyen Âge dia nankalaza izany ity festival ity izay mampatsiahy ny zava-bitan'ny vondrona Knights Templar. Indraindray ny antoko dia be voninahitra noho ny tamin'ny hafa. Saingy, tsy hisy izany raha tsy Taonjato faha-XNUMX rehefa namboarina tamin'ny fomba ofisialy ny antoko, taona maro taty aoriana dia efa feno Romantisme, hamboarina ny fety amin'ny fomba tonga amintsika anio.
En 1959 nisy fanavaozana ny fety satria nandritra ny ady an-trano sy ny vanim-potoana taorian'ny ady dia nankalazaina faran'izay tsara araka izay tratra izy. Tamin'ity daty ity no namoronana vondrona Moors sy Kristiana, ho fanampin'ny maro amin'ireo peñas izay mbola mandray anjara amin'ny fankalazana. Ireo akanjo itovizan'ny soavaly divay dia havaozina ihany koa.
Ireo soavaly divay
Avy amin'ny referansa voalohany amin'ny antontan-taratasy, nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, ny festival dia nivoatra tamin'ny fomba anehoana azy ankehitriny. Androany izy io dia mandrafitra fifaninanana telo izay manome lanja ny tanjaka, ny hatsarana ary ny fihetsem-po: ny fifaninanana soavaly tsy misy mpitaingina, ny fifaninanana fampiadiana ary ny fifaninanana hazakazaka.
Ny 1 sy 2 mey no hanaovana ireo fifaninanana ireo. Fa koa, amin'ny faha-3 ny ankizy kely dia afaka mandray anjara amin'ny fety miaraka amin'ny pony izay maneho ny Tarika ny soavaly divay.
Ny fifaninanana soavaly bareback
Ny fankalazana an'i Los Caballos del Vino sy ny festival ho fanomezam-boninahitra ny Masina sy Vera Cruz, manomboka amin'ny 1 Mey, nitondra ny soavaly teny an-dalambe mba hanombanana ny morphology-ny. Ny soavaly dia aseho amin'ity andro voalohany ity amin'ny toetrany voajanahary indrindra, madio, miborosy tsara ka mamirapiratra ny volo. Ny volom-borona malefaka na mirandrana na taovolo hafa manapa-kevitra ny vatolampy.
Vita aloha matso izay anehoan'ny vato ny soavaliny, ny sasany mampandeha azy mihazakazaka fa ny sasany kosa mandeha am-pilaminana azy ireo mba hankasitrahana ny hatsaran-tarehin'izy ireo. Nandritra io fitsidihana io manao fitsapana fohy ny hazakazaka izay hatao ny ampitso.
Any amin'ny farany ity matso ity, ny mpitsara ny tarika Horse divay, tondro ireo soavaly izay niavaka ity taona ity ary manome amboara ho an'ny peñas izy ireo mpandresy.
Avy eo dia esorina eny an-dalambe ireo soavaly hahafahany miala sasatra amin'ny fitoerany na ny famboleny.
Ny fifaninanana Hair dia natao hatramin'ny 1980, ary ny hatsaran-tarehy sy ny fitondra soavaly dia omena lanja. Tsy misy lalàna mifehy, ka ny safidin'ny mpandresy dia alain'ny jury.
Ny Peñas izay niavaka indrindra dia i Zuagir, Mudacid, Terry ary Chirinos, ity farany no nandresy nandritra ny enin-taona nisesy.
Andro faharoa amin'ny fety dia manomboka amin'ny maraina be amin'ny fanasana sy ny fampiasan-tsoavaly amin'ny tranokala maherin'ny efa-polo manerana ny tanàna. Matetika io fombafomba io dia misy vitsivitsy ny mpijery, mihoatra ireo mifandray amin'ny klioban'ny caballistas na ny fianakavian'ny tanàna. Aorian'izany dia alain'ny soavaly ny arabe ao an-tanàna ary atao ny hazakazaka malaza Los Caballos del Vino.
Ny harnessing dia misy ny famolavolana ny akanjo lava sy ny zaitra ary ny peta-kofehy mifototra amin'ny landy, rhinestones ary ny volamena sy ny volafotsy volafotsy. Ny akanjo dia vita amin'ny valo ambin'ny folo: ny rogue ho an'ny lohany, ny volom-borona satroboninahitra azy, palitao roa voaravaka kofehy miloko, ramalera roa, ny saina, ny saron-tratra, crinera roa, lamba firakotra roa, fatorana roa, ny vodiny ary roa fehin-tanana. Ny tampony dia nasiana rojo vy sy ny olona izay miraikitra ao ireo.
Tsy ny akanjo anaovan'ny soavaly ihany no sarobidy fa ny fampisehoana azy momba ny biby, mankasitraka ny firindrana misy eo amin'ny biby sy ny fitafiany. Ny zava-dehibe dia ny fahitana ny soavaly amin'ny fitafiany sy ny fitazonana ny fitoniany mandritra ny andro.
Ny antontan-taratasy tahiry tranainy indrindra miresaka momba ny firavaka Los Caballos del Vino dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Tamin'ny voalohany, ny soavaly divay Nitafy lamba fandriana, lamba manila na trousseau izy ireo ny ampakarina. Taty aoriana miaraka amin'ny fanavaozana ny antoko, akanjo manokana no natomboka namboarina ho an'ny soavaly. Ny asan'ny mpanao amboradara sy ny mpamorona manta dia nanomboka nahazo ny fifandraisany mandra-pahafantatra azy tsara tao an-tanàna. Akanjo tsirairay, izay voaravaka landy sy volamena izy, afaka herintaona vao vita ary mitentina euro an'arivony.
Ny hazakazaka soavaly divay
Ny hazakazaka divay divay dia manana mpanaraka sy laza marobe, io no fifaninanana malaza indrindra amin'ireo festival lehibe ao Caravaca de la Cruz.
Izy io dia torontoronina toy ny andrana amin'ny fotoana ifaninananan'ny soavaly amin'ireo klioban'ny caballistas samihafa izay mandray anjara amin'ny fankalazana. Miaraka amin'ilay soavaly ireo mpitaingin-tsoavaly efatra izay mihazakazaka miaraka amin'ilay biby amin'ilay antsoina hoe "Cuesta del Castillo". Andao isika hijery horonantsary iray amin'ireo hazakazaka ireo alohan'ny hanohizany hanazava bebe kokoa ity fifaninanana ity.
Mihanika ny “La Cuesta del Castillo” ireo biby, lavitra ny 80 metatra manana hantsana 14%, mitahiry 11 metatra.
Amin'ny hazakazaka, ireo soavaly, tsirairay, mihazakazaka miaraka amin'ireo mpitaingin-tsoavaly efatra, roa eo aloha ary roa ao aoriany, miaraka amin'ilay biby mifikitra aminy. Raha misy amin'izy ireo navoaka alohan'ny hiampitana ny tsipika fahatongavana dia mitranga ny fanafoanana an'ny soavaly.
Ny hazakazaka dia natokana ho an'ny rafitra mandroso, fa rehefa mandeha ny fotoana, ny fandrefesana ny tanana amin'ny sainam-pirenena dia nampiasaina tamin'ny voalohany. Ny hetsiky ny mpijery manokana koa dia rafitra fandrefesana taloha.
Taloha ela dia nahazo vola izany, saingy androany, ny fampaherezana ny fahatongavana voalohany ary ny avonavona miaraka aminy no manentana ny mpandray anjara.
Amin'ny faran'ny hazakazaka, eo amin'ny esplanade an'ny Real Basilica Santaurio, no aseho ny amboara amin'ny sokajy samihafa.
Ny tena fanisan-taona hoe oviana no nanomboka ireo hazakazaka ireo dia tsy fantatra, na dia ny Ny fijoroana ho vavolombelona am-bava dia efa miresaka momba ny taonjato faha-XNUMX avy aiza no misy fakany bebe kokoa. Nanomboka tamin'ny 1894 dia nanomboka nanao dokambarotra tamina fandaharan'asan'ny antoko sasany izy ireo manamarina azy ireo ho toy ny nentin-drazana, izay milaza amintsika fa efa nihombo tamin'ny andrana izy ireo.
fomban-drazana ireo soavaly ireo ihany no nampiasaina ho an'ny asa fambolena. Avy amin'ny 1960 rehefa manomboka mifidy ireo biby izy ireo ary mampiavaka azy ireo ho an'ity asa ity: fanatanjahan-tena, sakafo ary fikarakarana. Toy izany koa, mpitaingin-tsoavaly dia nanomboka niofana nandritra ny taona ihany koa.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny valin'ny hazakazaka dia nampidinina hatramin'ny 7 segondra, zavatra izay tsy ho vita raha tsy nisy ny fiofanana sy ny fotoana ampiasain'ny mpitaingin-tsoavaly sy ny soavaliny mandritra ny taona.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, ny fotoana mety indrindra voarakitra ka hatramin'izao dia 7 segondra sy 713 arivo, nahatratra ny Peña Artesano tamin'ny 2016.
Ity fankalazana ity dia iray amin'ireo manan-danja indrindra sy solontenan'ny Caravaca de la Cruz. Amin'ny 2004, ny Festivities ho fanomezam-boninahitra an'i Santísima sy Vera Cruz dia nambara ho tombotsoan'ny mpizahatany iraisam-pirenena ary manokana ny fankalazana ny soavaly divay dia maniry ny hanambaràn'ny Unesco ho lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ny soavaly divay: ny tantaran'izy ireo sy ny fety